Fanafihana tao Mananjary : jiolahy efatra voatifitry ny zandary, Kalachnikov roa tratra | NewsMada
Fanafihana tao Mananjary : jiolahy efatra voatifitry ny zandary, Kalachnikov roa tratra
Nikasa hitsoaka tampoka teny an-dalana hitondrana azy ireo teny amin’ny borigadin’ny zandary ireo jiolahy efatra tompon’antoka tamin’ny fanafihana tao Tsaramiadana Mananjary, ny alakamisy teo. Tratra tany amin’izy ireo ny basy Kalach roa miaraka amin’ny bala 11, miampy basy vita gasy sy sabatra…
Jiolahy efatra nanao fanafihana nahafatesan’olona tao amin’ny distrikan’i Mananjary, ny 25 aogositra 2017 lasa teo ireto matin’ny zandary ireto. Tratra tany amin’izy ireo nandritra ny fisavan’ny zandary ny fitaovam-piadiana mahery vaika. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary, andian-dahalo maromaro no tompon’antoka tamin’ny fanafihana mpivarotra iray ao Tsaramiadana, kaominina ambanivohitra Marokarina Mananjary tamin’io fotoana io. Namoy ny ainy nandritra ity fanafihan-dahalo ity ny raim-pianakaviana iray tompon-trano ka voaroba tamin’izany ny fitaovana sarobidy rehetra tao an-tranon’ilay niharam-boina.
Nahazo loharanom-baovao ny zandary ao Mananjary ny harivan’io ihany ka nanao ny fanarahan-dia sy nanao “bouclage”. Nisy koa ny firaisankinan’ny mponina sy ny ben’ny Tanàna ary ny zandary ao amin’ny kaompania Mananjary sy Manakara. Somary nanahirana ihany anefa ny fanarahan-dia noho ny fisian’ny ala mikitroka nandalovan’ireo malaso, saingy nahazo fampitam-baovao ny zandary, ny alarobia teo fa misy lehilahy miisa fito mikasa hiampita lakana hihazo an’Ifanadiana. Voasambotra ny efatra raha tafatsoaka kosa ny telo. Mbola hita tany amin’izy ireo ny basy Kalach roa sy bala 11 ary ireo fitaovam-piadiana hafa nampiasain’izy ireo. Voatifitra teny an-dalana hihazo ny borigadin’ny zandary ao Vohilava izy ireo raha nikasa hitsoaka.
Lavon’ny polisy tao Toliara koa ny jiolahy iray…
Jiolahy iray koa votifitry ny polisy tao Tsienengea ny asabotsy maraina. Araka ny vaovao azo, jiolahy mpampihorohoro sy mpanakana olona amin’ny alina ary mpanao sinto-mahery sy mpanakana olona avy namonjy lanonana amin’ny alina ity ranamana ity. Taorian’ny loharanom-baovao azon’ny polisy, nidina teny an-toerana ny polisy kanjo nitifitra avy hatrany raha vao nahita ireo polisy ity jiolahy, marihina fa nitifitra intelo ity jiolahy ity fa tsy nahavoa ireo polisy. Manoloana izany, namaly ireo polisy ka voa teo amin’ny kibony ity jiolahy ity ka nianjera taminy tany ary maty tsy tra-drano. Ity jiolahy maty ity no lehiben’ny « Bande des 4 » araka nambaran’ny komisera centrale, izay malaza fa mpampihorohoro ny tanànan’i Toliara ary betsaka ny fitarainana momba azy ireo. Araka izany, mbola karohina ireo namany telo lahy izay miriaria ao Tolara ihany izay marihina fa mitondra basy ka anairana ny rehetra hifanome tanana amin’ny polisy mba hahamora ny fisaborana azy ireo.
Jean Claude sy CMS